परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ४३६ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सामान्य व्यक्तिको स्वरूपलाई पुनर्स्थापित गर्न, अर्थात्, सामान्य मानवता हासिल गर्नको लागि, मानिसहरूले केवल उनीहरूको वचनद्वारा मात्र परमेश्‍वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्। त्यसो गरेर तिनीहरू आफ्नै हानि मात्र गर्छन्, र यसले तिनीहरूको प्रवेश वा रूपान्तरणमा फाइदा गर्दैन। त्यसकारण, रूपान्तरण प्राप्त गर्न, मानिसहरूले अलिअलि गर्दै अभ्यास गर्नुपर्छ। तिनीहरू बिस्तारै प्रवेश गर्नुपर्छ, अली-अली गर्दै खोज्नु र पत्ता लगाउनुपर्छ, सकारात्मक भएर प्रवेश गर्नुपर्दछ, र सत्यको व्यावहारिक जीवन; एक सन्तको जीवन जिउनुपर्छ। त्यसपछि, वास्तविक थोकहरू, वास्तविक घटनाहरू, र वास्तविक वातावरणले मानिसहरूलाई व्यावहारिक तालिम दिन्छ। मानिसहरूले ओठको सेवा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन; यसको सट्टा, तिनीहरूले वास्तविक वातावरणमा तालिम लिनुपर्छ। मानिसहरूले पहिले उनीहरूमा अति थोरै क्षमता छ भनी थाहा पाउँछन् र त्यसपछि उनीहरूले सामान्य रूपमा परमेश्‍वरका वचनहरू खान्छन् र पिउँछन्, सामान्य रूपमा प्रवेश गर्छन् र अभ्यास गर्छन्; यसरी मात्र उनीहरूले वास्तविकता प्राप्त गर्न सक्दछन्, र यसरी नै प्रवेश अझ तीव्र गतिमा आउन सक्छ। मानिसहरूलाई रूपान्तरण गर्नको लागि, केही व्यावहारिकता हुनुपर्दछ; तिनीहरूले वास्तविक थोकहरू, वास्तविक घटनाहरू, र वास्तविक वातावरणमा अभ्यास गर्नुपर्छ। के एक व्यक्तिले मण्डलीको जीवनमा मात्र निर्भर भएर साँचो तालिम लिन सक्छ? के मानिसहरू यस्तो प्रकारले वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्छन्? सक्दैनन्! यदि मानिसहरू वास्तविक जीवनमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् भने, तिनीहरू आफ्नो पुरानो जीवनशैली र काम गर्ने पुराना तरिकाहरू रूपान्तरण गर्न सक्दैनन्। यो पूर्ण रूपमा मानिसहरूको आलस्य र धेरै परनिर्भरताका कारणले होइन, तर यसको कारण के हो भने, मानिसहरूसँग जिउने क्षमता छैन, र यसको अतिरिक्त, उनीहरूलाई सामान्य व्यक्तिको स्वरूपको सम्बन्धमा परमेश्‍वरको मापदण्डको ज्ञान छैन। विगतमा, मानिसहरू जहिल्यै पनि कुरा गर्दथे, बोल्थे, कुराकानी गर्थे—र तिनीहरू “वक्ता” समेत बने—तापनि उनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो जीवनको स्वभावमा रूपान्तरणको खोजी गरेनन्; यसको सट्टा, तिनीहरूले अन्धाधुन्ध गहन सिद्धान्तहरूको खोजी गरे। यसैले, आजका मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास गर्ने धार्मिक शैली परिवर्तन गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले एउटा घटना, एउटा थोक, एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित भएर अभ्यासमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले ध्यान दिएर यो गर्नुपर्छ—तब मात्र तिनीहरूले परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन्। मानिसहरूको रूपान्तरण तिनीहरूको सारको परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ। त्यो कामको लक्ष्य मानिसहरूको सार, तिनीहरूका जीवन, र तिनीहरूको आलस्य, परनिर्भरता, र दासत्वमा लक्षित हुनुपर्दछ—यस तरिकाले मात्र उनीहरू रूपान्तरण हुन सक्छन्।
मण्डलीको जीवनले केही क्षेत्रहरूमा परिणाम उत्पन्न गर्न सक्‍ने भए तापनि, मुख्य कुरा त अझै पनि के हुन्छ भने, वास्तविक जीवनले नै मानिसहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। कुनै व्यक्तिको पुरानो स्वभावलाई वास्तविक जीवनविना रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि हामी अनुग्रहको युगको अवधिको येशूको कामलाई विचार गरौं। जब येशूले पहिलेका व्यवस्थाहरूलाई रद्द गर्नुभयो र नयाँ युगका आज्ञाहरू स्थापित गर्नुभयो, तब उहाँ वास्तविक जीवनका वास्तविक उदाहरणहरू प्रयोग गरेर बोल्नुभयो। विश्राम-दिनमा येशू आफ्ना चेलाहरूलाई गहुँको खेततिरबाट डोऱ्याउँदै लैजानुभएको बेला, उहाँका चेलाहरू भोकाए र अन्नका बालाहरू चुँडाएर खाए। फरिसीहरूले यो देखेर तिनीहरूले शबाथको दिन पालन गरिरहेका छैनन् भनी भने। तिनीहरूले शबाथको दिन खाडलमा खसेका बाछाहरूलाई बचाउन मानिसहरूलाई अनुमति छैन, किनभने विश्रामको दिनमा कुनै काम गर्नुहुँदैन पनि भने। येशूले नयाँ युगको आज्ञा बिस्तारै विस्तार गर्नका निम्ति यी घटनाहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभयो। त्यस समयमा, उहाँले मानिसहरूलाई बुझ्न र रूपान्तरण हुन सहायता गर्नको लागि धेरै वटा व्यावहारिक विषयहरू प्रयोग गर्नुभयो। यही सिद्धान्तद्वारा पवित्र आत्माले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, र मानिसहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्‍ने एउटै मात्र तरिका यही हो। व्यावहारिक विषयहरूविना, मानिसहरूले सैद्धान्तिक र बौद्धिक बुझाइ मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्—यो रूपान्तरण हुने प्रभावकारी तरिका होइन। त्यसैले, कुनै व्यक्तिले तालिमद्वारा कसरी बुद्धि र अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छ? के मानिसहरूले सुनेर, पढेर, र आफ्नो ज्ञान बढाएर मात्र बुद्धि र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ? यस्तो कसरी हुन सक्छ? मानिसहरूले वास्तविक जीवनमा बुझ्नु र अनुभव गर्नुपर्दछ! त्यसकारण, एक व्यक्तिले तालिम लिनैपर्छ, र ऊ वास्तविक जीवनबाट अलग हुनु हुँदैन। मानिसहरूले विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ र तिनीहरू विभिन्न पक्षहरूमा प्रवेश गर्नुपर्दछ: शिक्षाको स्तर, अभिव्यक्ति क्षमता, विभिन्न कुराहरू देख्‍ने क्षमता, समझशक्ति, परमेश्‍वरको वचन बुझ्ने क्षमता, सामान्य ज्ञान र मानवजातिका नियमहरू, र मानवजातिसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू जसद्वारा मानिसहरूसँग सुसज्जित हुनुपर्छ। बुझाइ प्राप्त गरिसकेपछि, मानिसहरूले प्रवेशमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, र त्यसपछि मात्र रूपान्तरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि कसैले बुझाइ प्राप्त गरेको छ, तर तिनीहरूले अभ्यासलाई बेवास्ता गर्छन् भने, रूपान्तरण कसरी प्राप्त हुन सक्छ? वर्तमानमा, मानिसहरूले धेरै कुरा बुझ्दछन्, तर तिनीहरू वास्तविकतामा जिउँदैनन्; तसर्थ, तिनीहरूसँग परमेश्‍वरको वचन सम्‍बन्धी आवश्यक बुझाइ थोरै मात्र हुन्छ। तैंले तुलनात्मक हिसाबमा थोरै मात्र ज्ञान प्राप्त गरेको छस्; तैंले पवित्र आत्माबाट थोरै मात्र प्रकाश प्राप्त गरेको छस्, तापनि तँ वास्तविक जीवनमा प्रवेश गरेको छैनस्—वा तैँले प्रवेश गर्नेबारे वास्ता पनि गर्दैनस्—त्यसैले तँ कम रूपान्तरण भएको छस्। त्यत्ति लामो समयपछि, मानिसहरूले धेरै कुरा बुझ्छन्। तिनीहरू सिद्धान्तहरू सम्बन्धी आफ्नो ज्ञानको बारेमा धेरै कुरा गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूको बाहिरी स्वभाव उस्तै नै रहन्छ, र तिनीहरूको मूल क्षमता यथावत् रहन्छ, अलिकति पनि अगाडि बढ्दैन। यदि यस्तो हो भने, तँ अन्ततः कहिले प्रवेश गर्नेछस्?